China Kinetic LED Bulb ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta ihe |Fyl
Egwuregwu bọọlụ LED
Bọọlụ Beam na-atụgharị
Ìhè akụkụ anọ
Mkpanaka okpukpu abụọ
Igwe ọkụ ọkụ Kinetic LED
1 Igwe ọkụ LED maka 1 winch
Akụkụ nke bọlbụ: 60x106mm
Agba okpomọkụ: 2700K
Akụkụ (3m/6m): 304x247x167mm, arọ: 7kg
Akụkụ (9m): 324x277x167mm, arọ: 7.5kg
Akụkụ (12m): 354x317x167mm, arọ: 8.5kg
Ikike ibuli: 1.5kg
Ọsọ ibuli: 0-1m/s
Voltaji: 100-240V AC, 50-60 Hz
Ike ọkụ: 80W
Ọwa DMX: 9ch
njikwa: DMX 512
Ụbọchị Banye/Ọpụpụ: 3-pin XLR DMX
Ntinye/Ọpụpụ Ike: Njikọ ọkụ
Uru maka ụlọ ọrụ mgbazinye: Ọ dị mma na akụ na ụba na winch DMX anyị dabara maka pendants anyị dị iche iche n'okpuru ikike ibuli ya.FYL ga-eji nwayọọ nwayọọ na-emelite pendants ọhụrụ maka nhọrọ gị karịa n'oge dị iche iche.
Sistemụ ọkụ ọkụ kinetic
Anyị na-enye sistemu ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ pụrụ iche nke na-eme ka ngwakọta ọkụ na mmegharị zuru oke.Sistemụ kinetic ọkụ bụ ihe dị mfe ma na-egbuke egbuke iji bulie na ala ihe ọkụ ọkụ jikọtara nka nke ọkụ na teknụzụ igwe.Na mgbakwunye, anyị nwekwara ike ịnye ọrụ ahaziri dịka ịchọrọ.
Anyị nwere ndị na-emepụta ihe'ngalaba nwere ahụmahụ imewe ihe karịrị afọ 8.Anyị nwere ike ịnye nhazi nhazi, nhazi nhazi eletriki, ihe ngosi vidiyo 3D nke ọkụ ọkụ maka ọrụ gị. Anyị nwere ike ịnye nhazi nhazi na nhazi vidiyo 3D nke ọkụ ọkụ maka ọrụ gị.
Anyị nwere ahụmịhe ndị injinia nke sistemu ọkụ ọkụ ọkụ maka ọrụ ntinye na ọrụ dị iche iche.Anyị nwere ike ịkwado ndị injinia na-efega n'ebe ọrụ gị maka nrụnye ozugbo ma ọ bụ hazie otu injinia maka ntinye-nduzi ma ọ bụrụ na ị nwere ndị ọrụ mpaghara.
Enwere ụzọ abụọ anyị nwere ike isi kwado mmemme maka ọrụ gị.Injinia anyị na-efega n'ebe ọrụ gị maka mmemme ozugbo maka ọkụ ọkụ.Ma ọ bụ anyị na-eme tupu mmemme maka ọkụ ọkụ dabere na imewe tupu mbupu.Anyị na-akwado ọzụzụ mmemme n'efu maka ndị ahịa anyị chọrọ ịmụta nkà nke ọkụ kinetic na mmemme.
Vidiyo ndị emetụtara
Ngwaahịa egosipụtara - Mkpado na-ekpo ọkụ - Sitemap.xml , , , , , ,